Delmadinone acetate အမှုန့် (13698-49-2) hplc≥98% Buy | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အမျိုးသမီးဟော်မုန်း / Delmadinone Acetate အမှုန့်
SKU: 13698-49-2. အမျိုးအစား: အမျိုးသမီးဟော်မုန်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Delmadinone acetate အမှုန့် (13698-49-2) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Delmadinone acetate အမှုန့် ပထမဦးဆုံးအ 1959 အတွက်စာပေမှာဖော်ပြထားတဲ့ခဲ့သည်အနည်းဆုံး 1972.It အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ Tardak နှင့် Zenadrex အောက်မှာဥရောပနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၌ဤနှစ်တွင်စျေးကွက်ကတည်းကစျေးကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Delmadinone Acetate antigonadotropic နှင့်ဤအရပ်မှ antiandrogenic နှင့် antiestrogenic သက်ရောက်မှုနှင့်အတူတစ် progestogen ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Delmadinone Acetate သည့်အန်ဒရိုဂျင် receptor မှချည်နှောင်နှင့်ဖွယ်ရှိအလားတူ chlormadinone acetate နှင့် osaterone acetate တူသောဆက်စပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများဤအဲဒီ receptor ၏တစ်ဦးရန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
Delmadinone Acetate အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
Delmadinone Acetate အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Delmadinone Acetate အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 167-170 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (Dec ။ )
သိုလှောင်မှုကို Temp: -20˚Cရေခဲသေတ္တာ
အရောင်: အလင်းကို Tan ကအမှုန့်
Delmadinone Acetate အမှုန့်သံသရာ
ဓာတုအမည်များ: Delmadinone Acetate အမှုန့်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ: Delmate, Estrex, Tardastren, Tardastrex, Vetadinon နှင့် Zenadrex, Tardak ။ Delmadinone acetate (DMA) အမှုန့်, 13698-49-2
နာမ်: 17- (Acetyloxy) -6-chloropregna-1,4,6-triene-3,20-Dion; 17-Acetoxy-6-chloropregna- 1,4,6-triene-3,20-Dion; 17α-Acetoxy-6-chloropregna-1,4,6-triene-3,20-Dion; 6-Chloro-17-hydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-Dion Acetate; Delminal; Estrex; RS 1301; Tardastrex; Tarden; Zenadrex; Δ1-Chlormadinone Acetate;
Delmadinone Acetate အမှုန့်အသုံးပြုမှု
Delmadinone Acetate အမှုန့် (CAS 13698-49-2) ကို pituitary gland ကနေ ACTH ၏လွှတ်ပေးရန်၏တားစီးကနေ adrenal ဖိနှိပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကုသခွေးကုထုံးကာလအတွင်းသို့မဟုတ်ပြီးနောက်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များအကြောင်းမဲ့လျှင် glucocorticoid မလုံလောက်လက္ခဏာဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဂလူးကို့စသည်းမခံမဟုတ်သလို hypersomatotropism မအကြံပြုထိုးမှုနှုန်းမှာ Delmadinone Acetate အမှုန့်ပေးထားအထီးခွေးအတွက်ဖွယ်ရှိပုံရသည်, ဒါပေမယ့်ကုသခွေးအတွက်အလွန်အကျွံကြီးထွားဟော်မုန်း Secret များအတွက်အလားအလာအတိအကျမသိရသေးနေဆဲဖြစ်သည်။
Delmadinone Acetate အမှုန့်, antiestrogen နှင့် antiandrogen လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအဓိကချို့ယွင်း; estrus ဖိနှိပ်ခြင်းနှင့်ခွေးနှင့်ကြောင်အတွက်ကိုယ်ဝန်တားဆီးလေ့ရှိတယ်။
တစ်ဦးက multicentre ကျပန်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုခွေးအတွက်ညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ် hyperplasia များ၏ကုသမှု Delmadinone Acetate မှုန့်နဲ့ osaterone acetate ၏ကုထုံးအလားအလာနှိုင်းယှဉ်ဖို့ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အဆိုပါ osaterone025 ခွေးခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာ / ကီလိုဂရမ် bodyweight mg · 73 မှာနှုတ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ delmadinone3မီလီဂရမ် / 69 ခွေးကီလိုဂရမ် bodyweight မှာတစ်ခုတည်းအသားသို့မဟုတ်အရေပြားအောက်ဆုံးဆေးထိုးခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 180 ရက်ကြာရုံးတင်စစ်ဆေးစဉ်အတွင်းခွေးဟာသူတို့ရဲ့လက်တွေ့လက္ခဏာနှင့်ဆီးကျိတ် volume အတှကျငါးကြိမ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုမူးယစ်ဆေးဝါးလက်တွေ့ဆိုင်းဘုတ်များလျှော့ချခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံလက်တွေ့လွှတ် inducing အတွက်အလားတူထိရောက်သော ရှိ. , နှစ်ဦးစလုံးအသေးအဖှဲအများစုကူးပြောင်းရေးကာလဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများအလားတူအဆင့်ကိုသွေးဆောင်။ Osaterone သိသိသာသာပိုမိုလျင်မြန်စွာ delmadinone ထက်ခွေး၏ဆီးကြိတ်ဂလင်း၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုလျှော့ချ။
Delmadinone Acetate အမှုန့်များ၏သောက်သုံးသောကဘာလဲ
Delmadinone Acetate အမှုန့် Interstitial ဆဲလ် function ကိုသိမ်းထားသောအားဖြင့် testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အတွက်အဓိကချို့ယွင်းထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအကျိုးသက်ရောက်ရှိခြင်းတစ်ခု antiandrogen ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏ရလဒ် hypersexual အပြုအမူသို့မဟုတ်လိင်စိတ်လျော့နည်းကျဆင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။
Antiandrogens လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခု Modes သာရှိသည်ဟုယုံကြည်နေကြသည်:
1 ။ pituitary gonadotrophin လွှတ်ပေးရန်တားစီးနှင့်,
2 ။ တစ်ဦးအမူအကျင့်လိင်စင်တာ effecting ။
Delmadinone (Tardak) သက်ရောက်မှုများဆေးဝါးကိုရပ်တန်သောအခါ Reversible လုပ်ဖြစ်လူသိများကြသည်။
ပျမ်းမျှအား 0.1g ကြွက်များအတွက်ဆိုလိုသည်မှာ 500 mL အရေပြားအောက်ဆုံးနှင့်ပထမဦးဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် 10 ရက်ပေါင်းထပ်ခါတလဲလဲနိုင်ပါသည် - ကြွက်များအတွက်လိုင်စင်မပေးစဉ်အခါ, Pfizer မူးယစ်ဆေးကုမ္ပဏီကအထီးခွေးနှင့်ကြောင်များအတွက်ကဲ့သို့တူညီသောထိုးမှုနှုန်းနှင့်အရိပ်အယောင်မှာအသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုအကြံပြု လိုအပ်အဖြစ်ပုံအလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်လျှင်မ - ဖြစ်နိုင်သည်3ပြီးနောက် -4ရက်သတ္တပတ်တပ်မက်လိုချင်သောအကြိုးသကျရောချွတ်ကျီလျှင်။ (ဆေးထိုးအသုံးပြုမှုနောက်ထပ်တိရိစ္ဆာန်ဆရာကိုကိုးကား: 17)
VET အချက်အလက်စာရွက်ပေါ် AS ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာသင့်တယ်။ အဓိကလက္ခဏာများအထီးကြွက်များတွင်ကျူးကျော်များနှင့်ကွောအချို့ပုံစံများအဘို့ဖြစ်ကြ၏။ (ဓာတုသင်း၏တစ်ဦးကပုံစံတစ်မျိုး။ )
ကုတ်အင်္ကျီအရောင်အတွက် NB အပြောင်းအလဲများကဤတိရိစ္ဆာန်များဆေးထိုး၏အခြားဒေသများဖေါ်ပြခြင်းအတွက်ဥပမာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်လျှင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ
ဘယ်လို Delmadinone Acetate အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
Delmadinone Acetate အမှုန့် (INN, USAN, BAN) တစ်ခါတစ်ရံ Delmadinone Acetate အမှုန့်အဖြစ်အတိုကောက် (အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ Delmate, Estrex, Tardak, Tardastren, Tardastrex, Vetadinon, Zenadrex), နှင့်လည်း 1,6-bisdehydro-6-chloro-17α-acetoxyprogesterone အဖြစ်လူသိများ (က adrenocorticotropic ဟော်မုန်း၏တားစီးကနေတဆင့် adrenal မလုံလောက်ဖြစ်ပေါ်စေဖို့အလားအလာရှိပါတယ်အဖြစ်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေး medicine.It အတွက်အန်ဒရိုဂျင်-ဆက်စပ်အခြေအနေများကုသရန်အသုံးပြုသည်အရာ antigonadotropic (နှင့်ဤအရပ်, antiandrogenic နှင့် antiestrogenic) ဂုဏ်သတ္တိများစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူအသုံးပြုရမည်အတူတီးရွိုက် progestin ဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ pituitary gland ကနေ ACTH) Secret ။
အပြည့်အဝနားမလည်သော်လည်း, progestagens ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏ဖြစ်နိုင်ခြေ mode ကိုအားဖြင့်သားအိမ်သိသိတားဆီး, gonadotropic ဟော်မုန်း Secret ၏ဖိနှိပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Delamadinone Acetate ကုန်ကြမ်း Powder (CAS 13698-49-2)
Delmadinone Acetate အမှုန့်စျေးကွက်
Delmadinone Acetate အမှုန့်မဆိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှုရှိပါသလား
Delmadinone Acetate အမှုန့်ပေါ် Publish သတင်းအချက်အလက်ပမာဏမှာဖြစ်ပါတယ်။ နားဆင်နိုင်ပါတယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုယ်အလေးချိန်, polydipsia ဒေသခံအသားအရေတုံ့ပြန်မှုများနှင့်သားအိမ်ရောဂါဗေဒတစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ လက်တွေ့ဒေတာကြောင့်မွေးမြူရေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် DA သုံးစွဲဖို့မရဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်, တာရှညျနိုင်ပါတယ် DA ကုသမှုအဆုံးအကြားကြောင်းကြားကာလညွှန်ပြခြင်းနှင့်အပူပြန်သွားပါ။ Delmadinone Acetate အမှုန့်နှင့် chlormadinone acetate နှစ်ဦးစလုံးအဘို့, ကုသမှုတိုင်း4လအတွင်းထိုးသွင်းလျှင်ရံဖန်ရံခါအောင်မြင်မှုများအစီရင်ခံကုသမှုစဉ်အတွင်းတွင်စတင်နှင့်အတူ, ခွေးအတွက်သံသရာ၏တာရှညျရွှေ့ဆိုင်းများအတွက်မဟုတ်ဘဲထိရောက်သောဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ကုသသံသရာ၏ယာယီရွှေ့ဆိုင်းသို့မဟုတ် proestrus စဉ်အတွင်းသံသရာ-ဖိနှိပ်မှုများအတွက်အလွန်ထိရောက်သောမရှိကြပေ။ အဆိုပါ Post-ကုသမှုကလေးမွေးဖွားနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအသတင်းများအရသာမန်ပါပဲ။ ကုသမှုအနေဖြင့်လာမည့်သံသရာမှအဆိုပါအစီရင်ခံကြားကာလငယ်လေးတစ်ခွေးအရေအတွက်နှင့် chlormadinone များအတွက်နှစ်နှစ်မှ variable တက်အတွက် delmadinone များအတွက် 8 လခနျ့ဖြစ်ပါတယ်။
AASraw ထံမှ Delmadinone Acetate အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Delmadinone Acetate အမှုန့်ချက်ပြုတ်နည်း